Akhriso:- Maxay ahmiyad ah oo ay leedahay xuska aasaaska puntland xilli dayac badan uu jiro?. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandAkhriso:- Maxay ahmiyad ah oo ay leedahay xuska aasaaska puntland xilli dayac badan uu jiro?.
July 29, 2019 marqaan Puntland, Wararka Maanta 0
Waxaa la isu diyaarinaynaa dabaal deg si heer sare ah loo soo agaasimay, waxaa xusaynaa 21 sanno guuradii kasoo wareegtay dhismihii iyo aas aaskii Puntalnd.
Waxaanu dabaal degayna muddo 21 sanno kadib innagoo aanay noo dhisneyn hal warshad, hal Isbitaal oo qalabagsan, hal jaamacad oo dowladda Puntland leedahay. Waxaanu dabaal degayna xilli si weyn uu u burburay laamigii dheere ee isku xidhayey magaalooyinka bosaaso ilaa gaalkacyo. Waxaa nala tusayaa laab lakac iyo waxqabad artificial ah.
Weli waxaa la xanuunsanaynaa biyaha kharaar iyo dhagxaanta badan oo dadkeenu cabaayo, ma la awoodo in biyo nadiif ah helaan bulshada Puntland, malihin maanta hal isbitaal oo weyn oo bukaanka cudurada haleela lagula tacaali karo, qofkii wax yar gaaraan waa in dibadaha loola cararo oo dabiib caafimaad looga raadiyo.
Dowladda Puntland ee 21 sanno jirsatay haddanay wax ka qaban caafimaadka bulshada, biyo nadiif aan la haysan, dhanka tacliinta jaamacad dowladda dhistay aanay jirin, maxaan guga iyo sanadka ugu xafladeynaynaa?
Koronto ku filan magaalooyinka qaar lama helo, Bosaaso oo ah magaalo aad u kulul waxaa la awoodi waayey 21-kii sanno ee dowladda Puntland jirtay in koronto tamarta laga dhaliyo sida qoraxda,dabeysha ama biyaha badda laga hirgelin waayey.
Waxaa intaa ka sii murugo iyo tiiraanyo badan halbowlihii dhaqaalaha iyo ishii lagu tiirsanaa ee baayacmushtarkeenu wax ka dhoofsadaan, waxna kala soo degaan ee dekadda Bosaaso gacanta waxaa loo geliyey Dowladda Imaraadka Carabta oo rahan u haystaan inay dhisaan iska daaye waxaa la qorsheynayaa inay xidhanto dekadda Bosaaso oo falankeeda lagu jira.
Isku soo wada xooriyo waxaa muuqata inaynu dabaal degayno innagoo aan is arag halka aan joogno dhaqaale ahaan, bulsho ahaan iyo siyaasiyan Puntland.
Waxa Qoray Guulwade Bille Qabowsade